Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya waxay hiigsanaysaa inay dejiso 200 garoon diyaaradeed marka la gaadho 2024
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Isagoo ka hadlaya shirka FICCI Transport Infra Summit "Diirada: Dardargelinta Xawliga Horumarinta Infra ee Gaadiidka ee Odisha," oo ay soo qabanqaabisay FICCI Odisha State Council, Xoghayaha Wadajirka ah, Wasaaradda Duulista Hawada, Dowladda Hindiya, Ms. Usha Padhee, ayaa sheegtay in duulista Hindiya. waaxdu waxay goob joog u ahayd kobac xooggan dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxayna tilmaan u tahay dadaalka Hindiya ee ku aaddan dhaqaalaha US$5 tiriliyan. Waxay kaloo sheegtay in duulista rayidka aysan ahayn mid raaxo leh balse ay tahay mid si hufan u socota.
"Duulista Hawada ma aha oo kaliya qaab gaadiid balse waa matoorka koritaanka qaranka,” ayay tiri. Ms Padhee oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri Hindiya waxay leedahay suuqa duulimaadyada gudaha ee saddexaad ee ugu weyn, laakiin waxa ay diyaar u tahay in ay noqoto suuqa saddexaad ee ugu weyn ee duulimaadyada rayidka ah caalamka marka la gaaro 2024. "Dadku waa in ay awood u yeeshaan in ay qayb ka noqdaan waaxda duulista rayidka ee sii kordheysa," ayay raacisay. Waaxda duulista rayidka, ayay tiri, waxaa maamuli doona ganacsiga gaarka loo leeyahay, dowladduna ay u dhaqmi doonto sidii fududeeye.
Garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Tier 1 iyo Tier 2 ayaa bixiya dheelitirnaan qumman oo lagu dhalin karo maalgashi gaar ah, iyo halka aanay suurtagal ahayn maalgashiga gaarka ah, dawladdu waa maalgashanaysaa, ayay tidhi Ms. Padhee.
Iyadoo iftiimisay caqabadaha jira, waxay sheegtay in ganacsiyada qaybtan ay tahay inay noqdaan kuwo hufan oo faragelinta siyaasadda iyo habraacyadu ay noqdaan kuwo saaxiibtinimo leh. "Waxaan rajeyneynaa inaan caqabadahan wax kaga qabanno hab-raacyadan," ayuu yiri Xoghayaha Wadajirka ah.
Isagoo iftiiminaya kaabayaasha gaadiidka ee Odisha, Ms. Padhee waxay sheegtay in dawlad-goboleedka ay ka dhigtay gobol kheyraad leh, isku xirkana waa mid muhiim u ah Odisha. "Waxaan hiigsaneynaa inaan hubinno isku xirnaanta waarta," ayay tiri. Waxa ay sidoo kale sheegtay in shatiga Garoonka Diyaaradaha ee Rourkela la bixin doono 6-da bilood ee soo socota.
Mr. Manoj Kumar Mishra, Xoghayaha, Electronics iyo Technology Information, Xoghayaha, Sayniska iyo Teknoolajiyada, CRC iyo Xoghayaha Gaarka ah, Waaxda Ganacsiga iyo Gaadiidka, Dowladda Odisha, ayaa sheegay in xoogga qaybaha kaabayaasha waa in laga faa'iidaysto si loo yareeyo kharashka iyo Dawladdu waxay si weyn u maalgalinaysaa dhismaha waddooyinka waaweyn ee gobolka.
Mr. Subrat Tripathi, CEO, APSEZ (Ports), ayaa sheegay in isdhexgalka tignoolajiyada qaybta saadka ay tahay muhiimada ugu wayn. Waxa uu sidoo kale sheegay in xalalka saadka aan la arki karin si gooni ah, sababtoo ah waa xalal isku dhafan. Waxa uu iftiimiyay in wadooyinka dhaqaalaha iyo isku xidhka badan ee dekedaha ay yihiin baahida saacada jirta.
Dr. Pravat Ranjan Beuria, Agaasimaha - Garoonka Caalamiga ah ee Biju Patnaik, Bhubaneswar, ayaa sheegay in dhismaha cusub ee terminalka gudaha uu qaadi karo 2.5 milyan oo rakaab ah sanadkiiba iyo ka qaybgalka qaybta gaarka loo leeyahay waa qasab qaybta dadweynaha.
Mr. Dillip Kumar Samantaray, Agaasimaha Maamulka, Angul – Sukinda Railway Pvt Ltd., ayaa sheegay in horumarka gobolka uusan dhici karin haddii aan la horumarinin tareenada.
Mr. Siba Prasad Samantaray, oo ah Agaasimaha Maamulka, Odisha Rail Infrastructure Development Ltd., ayaa sheegay in jidka tareenka uu soo maray waddo dheer marka loo eego isku xirnaanta iyo raaxada. "Waxaan nahay fududeeyayaasha koritaanka cusub ee Odisha, tani waa waqtigii la ballaarin lahaa shabakada," ayuu raaciyay.
Ms. Monica Nayyar Patnaik, Gudoomiyaha, FICCI Odisha State Council iyo Agaasimaha Maamulka, Sambad Group, cinwaankeeda soo dhaweynta ayaa tiri, "Waxaan u baahanahay inaan baarno fursadaha kala duwan iyo xalalka kaabayaasha gaadiidka wax ku ool ah oo hufan halkaas oo aan ka heli karno fikradahayaga."
Mr. JK Rath, Guddoomiyaha, Guddiga MSME, FICCI Odisha Golaha Gobolka, Agaasimaha, Machem, iyo Mr. Rajen Padhi, Guddoomiyaha Guddiga Dhoofinta, FICCI Odisha Gobolka Golaha iyo Agaasimaha Ganacsiga, B -One Business House Pvt. Ltd., waxay soo bandhigeen aragtidooda ku aaddan baahida loo qabo kaabayaasha gaadiidka hufan ee gobolka.
Max Hartshorne wuxuu leeyahay,
Nofeembar 25, 2021 at 12: 25
Ma jiro wax ku jira maqaalkan oo ku saabsan dhisitaanka garoomo cusub. Halkee buu ka yimid ciwaankaas? Waxaan dhex maray xayaysiisyadaada soo booda ee aan dhamaadka lahayn iyo fiidiyoowga aan dhaqaaqi karin si aan isugu dayo inaan wax ka helo garoon diyaaradeed cusub waxba ma helin. Adiguna waxaad ku andacoonaysaa ciwaanka inay dhisayaan 200 oo garoon diyaaradeed BY 2024??? Laba sano in la dhiso 200 garoon diyaaradeed waa wax aan macquul ahayn.
Tafatire ahaan iyo qofka qoraya cinwaannada, waxaad haysaa shaqo si aad cinwaanku uga turjunto nuxurka sheekada dhabta ah. Kani ma yahay isku day kale oo quus ah oo lagu doonayo in la gujiyo? Waa hagaag waad heshay.